Discipline Archives — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Anshaxa Anshaxa Anshaxa Anshaxa Anshaxa Anshaxa Anshaxa Anshaxa Anshaxa Anshaxa Anshaxa Anshaxa Anshaxa Anshaxa
Tababarka A soconaysa
noloshayda oo dhan, Waxaan soo maray xilli ciyaareed marka aan la ahaantii dhiiriyo in ay ka shaqeeyaan. Marka waxaan ku jiray dugsiga sare, waxaan kaliya rabay in aan buff ku filan inuu soo jiito gabdhaha (waxaan ku guuldareysatay). In bilood ka hor arooska waxaan isku dayay in ay ka shaqeeyaan jidhkayga xeebta Malabka. Maalmahan, Waxaan kaliya isku dayaya si loo hubiyo in aan ku noolahay ee la soo dhaafay labaataneeyada aan. waxa riixaya My beddeleen sanadihii la soo dhaafay, laakiin waxa uusan waxba iska badalin waa sida yeelsiiyeen riixaya kuwa.
Waxaa laga yaabaa in aad tahay qof si dabiici ah soo afjaray in ay ka shaqeeyaan-qaylo ka soo baxday inay saaxiibaday kii boostada PIC iyo videos ee mudada tababarka maalin kasta. Laakiin haddii aad tahay qof aniga oo kale ah, waxa riixaya aad kor iyo hoos tagaan sida orgi kasta oo yar on boodboodo ah. Maxaa dhacaya haddii natiijada ka soo baxday shaqada weligiis socday, in kastoo? aad noqon lahaa dheeraad ah oo ku dhisan?
Shaqo adag bixiyaa Off
Intii lagu guda jiray bishii la soo dhaafay ee Olympics Winter waxaan ku jiray ka baqeen sida aan daawaday hillaac bobsledders degdeg ah oo snowboarders highflying. Waxaan la yaabey sida ay heer sare isboortiga, laakiinse waxaan jiray xitaa ka badan dhicin markii aan u maleeyay oo ku saabsan tababarka edbiyo waa ka qaaday inay halkaas ka heli.
Dhamaadka dhacdo kasta marka ciyaartoyda guul ka taagnaa podiums guusha ee, la…